१६ वर्षको कलिलै उमेरमा राजेश खन्नासँग बिहे गरेकी डिम्पलले किन २७ वर्ष छुट्टै रहेर पनि डि-भोर्स गरिनन् ? – Jagaran Nepal
१६ वर्षको कलिलै उमेरमा राजेश खन्नासँग बिहे गरेकी डिम्पलले किन २७ वर्ष छुट्टै रहेर पनि डि-भोर्स गरिनन् ?
काठमान्डौ : डिम्पल कपा-डियाले १६ वर्षको कलिलो उमेरमा नै फिल्मी राखेकी थिइन्। डिम्पलको फेशन-इन्स र स्टाइल अरु-भन्दा अलग नै छ। तर अहिले धेरैजसो मान्छे डिम्पल-लाई ट्विंकल खन्नाको आमा वा अक्षय कुमारको सासुको रुपमा चिन्छन्। किन २७ वर्ष छुट्टै रहेर पनि डि-भोर्स गरिनन् डिम्पलले ?
डिम्पल आफ्नो समयमा चर्चित अभिनेत्रीको रुपमा चिनिन्थिन्। उनले कमै उमेरमा कन्फिडेन्ट , ट्यालेन्ट र अभिनयबाट स्टारडम हासिल गरेकी हुन्। डिम्पल आफ्नो जन्मदिन ८ जुनमा मनाउछिन्। राज कपूरले आफ्नो छोरालाई डेब्यु गर्दा हिरोइनको रुपमा डिम्पललाई चुनेका थिए। त्यस फिल्मको नाम’बबी ‘ थियो। साथै फिल्म पनि हिट भएको थियो।
बबी ‘ रिलीज भएपछि डिम्पल राज र नरगिसको छोरी हुन् भने हल्ला फैलिएको थियो। डिम्पल बलिउडको पहिलो अभिनेत्री हुन् जसले पहिलो फिल्ममा सफलता पाएपछि पनि लामो समयसम्म फिल्मबाट दुरी बढाईन्।
डिम्पलको पहिलो र दोस्रो फिल्ममा ११ वर्षको अन्तर थियो। डिम्पलको जन्म १९५७ ८ जुनमा भएको हो। उनी परिवारकी जेठी छोरी हुन् र उनी गुजराती परिवारबाट हुन्। यसका साथै डिम्पलको बारेमा थाहा पाउनुहोस् केहि रोचक कुरा !
डिम्पल बलिउडमा ग्ल्यामर्स लुक र से क्सी फि ग रको कारण निकै चर्चित थिइन्। उनले ‘सागर’ फिल्ममा रुदालीको भूमिकाका निभाएकी थिइन्। डिम्पललिई फिल्ममा ब्रेक राज कपूरले दिएका थिए।
१९७३ मा पहिलोपटक ‘बबी’ फिल्ममा उनी ऋषि कपूरको अपोजिट लीड रोलमा थिइन्। । ‘बबी ‘ फिल्ममा काम गर्दा उनी १६ वर्षकी मात्र थिइन्। पहिलो फिल्मबाट नै डिम्पलले ऋषि कपूरलाई डेट गर्न लागेकी थिइन्।
डिम्पलले १६ वर्षको उमेरमा राजेश खन्नासँग बिहे गरेकी थिइन्। त्यस समय डिम्पल राजेशभन्दा १५ वर्ष सानी थिइन्। राजेश र डिम्पलबीच १५ वर्षको अन्तर थियो।
बिहे गरेपछि डिम्पलले फिल्मबाट दुरी बनेकी थिइन् ताकि आफ्नो बच्चाको पालन-पोषण ठीक तरिकाले होस्। डिम्पल र राजेश खन्नाको बिहे धेरै समय टिकेन र ९ वर्षपछि यी दुई अलग बस्न थाले।
राजेश खन्नासँग अलग बसेपछि डिम्पलले ‘सागर ‘ फिल्मबाट कमब्याक गरेकी थिइन्। यस फिल्ममा डिम्पलले पहिलोपटक टपलेस सीन दिएकी थिइन्। डिम्पलले अनिल कपूरसँग दिएको इन्टीमेट सीनलाई अहिलेसम्म कै बोल्ड सीन मानिन्छ।
यस फिल्मको नाम ‘जाबांज’ हो। १९९३ मा आएको ‘रुदाली’ फिल्मबाट उनले नेशलन अवार्ड पाएकी थिइन्। डिम्पलको मन विवाहित सनी देओलमाथि पनि गएको थियो। यधपी यी दुईको सम्बन्ध ११ वर्षसम्म चलेको थियो र पछि उनीहरु टाढिएका थिए। डिम्पल अन्तिमपटक ‘तांडव’ वेब सीरिजमा देखिएकी थिइन्।